”Waxaan dareemayaa boqor boqor” – Ciyaar yahan Ingiriis ah oo loo cimaamaday! + Sawirro – Gool FM
”Waxaan dareemayaa boqor boqor” – Ciyaar yahan Ingiriis ah oo loo cimaamaday! + Sawirro
(Manama) 03 Abriil 2016 – Darawalka gawaarida ee Lewis Hamilton oo u dhashay dalkaasi Ingiriiska ayaa todobaad dhamaadkan tartan u jooga dalka Bahrain, balse waloow uu kaalinta 1-aad kaga guuleystey ninka ay isku safka yihiin ee Nico Rosberg, balse wiilkan reer Britain wuxuu muujiyay sida uu ula dhacsan yahay dhaqanka.
Hamilton ayaa yimid meeydaanka tartanka gawaarida ee Sakhir circuit oo uu tartanka u yimid, balse wuxuu muujiyey sida uu ula dhacsan yahay dhaqanka Carbeed.
Wuxuu Twitter-ka soo dhigay sawir uu gashan yahay khamiis cad oo gacma dheere ah iyo cimaamad cigaal leh: ‘Wax aan xushmad iyo jacayl ahayn uma hayo dhaqanka Bahrain!! Waxaan dareemayaa boqor boqor!!’
GOOGOOSKA: Inter Milan vs Torino FC 1-2 (Inter Milan oo jidkii Milan la marsiiyey!)